သုံးတတ်ရင်ဆေး မသုံးတတ်ရင်ဘေး GSM | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သုံးတတ်ရင်ဆေး မသုံးတတ်ရင်ဘေး GSM
သုံးတတ်ရင်ဆေး မသုံးတတ်ရင်ဘေး GSM
Posted by isequal to on May 4, 2012 in Copy/Paste | 13 comments
အခုဆို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ GSM ဖုန်းတွေတော်တော် ခေတ်စားလာတယ် ကောင်းပါတယ်ဗျာတစ်
ဦးနှင့်တစ်ဦး အဆက်သွယ်မပျက်တော့ဘူးပေါ့။ အိမ်ဘေးက ဆိုက်ကားနင်းတဲ့ ဦလေးကြီးတောင် သူ့သမီး
ဆယ်တန်းကျောင်းသူက ပူဆာလို့ဝယ်ပေးထားသေးတယ်။ဆိုးတာက ဖုန်းဝယ်ပြီးကတည်းက ညဘက်ဆို
ဆူသံတွေအမြဲကြားနေရတယ် ။အချိန်မတော်ဖုန်းပြောလို့၊ဖုန်းဘေ ခဏခဏကုန်လို့၊အဖေကလည်းဖုန်းတော့
၀ယ်ပေးပြီး ဖုန်းဘေကြတော့ မထည့်ပေးဘူးဆိုပြီး အဖေကိုပြန်ပြောသံတွေကောစုံလို့ပါ။ဒါတင်မကဘူး ဖုန်းတ
ခါမှမကိုင်ဘူးပဲနဲ့ ဖုန်းဆိုရင်touch screen မှ ဘာနှိပ်မိမှန်းမသိ တော်ကြာဖုန်းဆိုင်ပြေးရပြန်ပြီ။ဖုန်းပြင်တဲ့ဆိုင်
တွေတော့အလုပ်ဖြစ်တာပေါ့။တချို့ဆို အိမ်မှာတော့ စားဝတ်နေရေးက တနေ့နဲ့တနေ့လယ်ပတ်ရုံပဲ ရှိတယ်
သူများဖုန်းဆိုရင် ကိုယ်လည်းခါးမှာ ဖုန်းချိတ်ချင်ကြတယ်။တချို့ဆိုရင် ဖုန်းဝယ်နိုင်တဲ့ အနေထားတော့ရှိတယ်
ဒါပေမဲ့ ဖုန်းအကြောင်းနားမလည် ကြဘူး။အထူးသဖြင့် တောနေလူတန်းစားများ ဖုန်းဆိုတာရယ် တန်ဖိုးအနေ
အထားရယ် ဘာဖုန်းမှန်းမသိ GSM လား CDMA လား တိုင်နဲ့ဘယ်လောက်အကွာအဝေးဆိုပြောလို့ရမလဲမသိ
ကြဘူး နှစ်သိန်းတန်ဖုန်း ဆိုတာလေက်ပဲနားလည် ကြတယ်။ဖုန်းရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေကလည်း ရောင်းရပြီးရော
ဆိုပြီး သိသိရက်နဲ့ ကိုယ့်အတွက်ပဲကြည့်ပြီးလုပ်နေတာတွေအများကြီးပဲ။ ပြီးတော့မှ လိုင်းမမိလို့ဆိုပြီး မြို့ပေါ်
က လူတွေကို အရှုံးခံပြီး ရှော့ဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းရတာပေါ့။ ဒီလိုလူလည်ကြတဲ့ဆိုင်တွေ မြန်မာ့နိုင်ငံမှာများများရှိ
လေ မတိုးတက်လေပါပဲ။ သိတဲ့လူတွေကမသိတဲ့ လူတွေကို ပြောပြဖို့လိုသလို မသိတဲ့လူတွေကလည်း သိ
အောင်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ စာတွေများများဖတ်ကြပါ။ သူများပြောတာကို ခဏမှတ်ထား ကိုယ်ကိုတိုင်သေချာ
လေ့လာပြီးမှ ဦးနှောက်ထဲထည့်ကြပါ။ ကျွန်တော် ရွာတစ်ရွာကို ရောက်တော့ ဆိုင်နံရံမှာ ကပ်ထားတဲ့စာလေး
ပါ (ငါးထောင်တန်ဖုန်း အမြန်ထုတ်ပေး) တဲ့ ကောင်းလိုက်တဲ့တောင်းဆိုချက်ကလေး ကောင်းတာ့ပေါ့ ၊ဆိုက်
ကားနင်းတဲ့ လူလည်းကိုင်နိုင်တယ်၊ကုန်စိမ်းသယ်လည်း ကိုင်နိုင်တယ်၊ ပိုက်ဆံရှိတဲ့ လူဆို တအိမ်သားလုံး တစ်
လုံးစီကိုင်မှာပေါ့ ။ ဟုတ်ပါပြီ ဖုန်းလဲဝယ်ပြီးပြီ ဖုန်းကတ်လည်းရပြီ နေစဉ်ဖုန်းပြောဖို့ပိုက်ဆံ ဘယ်လိုရှာကြမလဲ။
ဖုန်းတော့ဝယ်ပြီးပြီ လူရှိန်အောင်လို့ ဖုန်းတော့ ပြောအုံးမှာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ မှာ တနေ့ကို ၀င်ငွေ
(တစ်ထောင်)ရအောင် မနည်းရှာရတဲ့ အောက်ခြေလူတန်းစားတွေ့ အများကြီးပါ။ တနေကုန် တနေခမ်း ရရာအ
လုပ် လုပ်ပြီး ညနေစောင်းမှ ဆန်ထုပ်ကလေးစွဲပြီးအိမ်ပြန် လမ်းဘေးဆိုင်က ပေါချောင်ကောင်းဟင်လေး နှစ်ရာ
ဖိုး သုံးရာဖိုးလောက်ဝယ်ပြီး ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းရတဲ့ လူတွေအများကြီးပါ။ အိမ်မှာရှိတဲ့ ခလေးကြီးတွေကလဲ
ခလေး ပေါက်စနလေးတွေချီပြီး ကော်စုတ်ကော်ပြတ် လိုက်ကောက်ရတဲ့ဘ၀တွေလဲအများကြီး ပါ။ နောက်ဆုံး
အနေနဲ့ (ငါးထောင်တန်ဖုန်း အမြန်ထုတ်ပေး) ဆိုတဲ့ တောင်းဆိုချက်ထဲမှာ ဒီလိုဆင်ရဲတဲ့သူများ မတောင်းဆိုမိ
ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။(မှတ်ချက်။ မြန်မာလူမျိုးများ ကြွားတာလေးတော့ ၀ါသနာပါသည်မို့)
ဟုတ်ပ .. ဒီကြားထဲ ရှိသေးတယ် ဖုန်းက key lock ကျနေတာကို သူ့ဖုန်းပျက်ပါပြီ ဆိုပြီး မြို့တက်လာတဲ့ သူတွေက ရှိသေး .. ဟေး .. ဟေး အကြိုက်ပေါ့ ခင်ဗျားဖုန်းက 8000 လောက်ကုန်ရင် အားလုံးပြန်ကောင်းမယ် နှစ်ရက်ကြာမှလာယူ တဲ့လေ .. အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ???
ထမိန်ပေါင်ပြီး video ခွေတောာင် ငှားကြည်.သေးတာ …
ဒါလောက်ကတော. အေးဆေး ပါ …..။
ဟဲလို အကြော်သည်ကြီးမိုက်လား အကြော် ၂၀ ဖိုး ပါဆယ်ထုပ်ထားနော်
အင်း ဟုတ်ပါ့ ညည နားပူတဲ့ ဒုက္ခတော့ မသိဘူး ။ ကားပေါ်မှာ လူကြပ်ရတဲံ ကြားထဲ ထမင်းချိုင့်က တစ်ဖက်
ဖုန်းက တစ်ဖက်နဲ့ ဟုတ်နေတာပဲ ။ အဲ ဖုန်းတွေ ထွက်ပြီးမှ ပိုပြီး ကားစီးရတာ စိတ်ပိုပိန်လာတယ် ။
ပူအိုက်တာရယ် ကားကြပ်တာရယ် အခုတော့ နားပါ ပူလာပြီ
မနေ့ ကအိမ်နားမှာ သတင်းတစ်ခုကြားရသေးတယ်၊ အခုဖုန်းတွေအကုန်လုံးလိုင်းပွင့်ပြီလေ
အဲ အိမ်နားမှာ ၀ယ်ထားတဲ့ ဦးလေးကြီးတစ်ယောက်က သူ့ဖုန်းက ဘယ်လိုမှမပွင့် ဘူးလေ
အဲဒါဝယ်တဲ့ဆိုင်ကို ပြန်သွားပြောတော့ ပွင့် တဲ့တစ်လုံးနဲ့လဲပေးပါ့မယ်တဲ့ ဒါပေမယ့်ငါးသောင်းတော့အရှုံးခံရမယ် တဲ့ ၊အဲဒါအရှုံးခံပြီး လဲလာပါတယ်ဗျာ၊အမှန်တော့လိုင်းမပွင့်တာမဟုတ်ဘူးဗျ
သူ့တို့ရောင်းလိုက်တဲ့ ဟန်းဆက်က မကောင်းတာပါ နားမလည်တော့ခံလိုက်ရတာပေါ့ဗျာ
၅ထောင်တန် သိပ်မလိုတော့ဘူး ကြားတာပဲ..
ဆယ်လူလာတွေ စပေါ်တဲ့အချိန်က ကိုင်ခွင့်ရနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းကို မေးကြည့်တယ် .. ဘာလို့ မလျှောက်တာ လဲ လို့ .. မှတ်ထား .. အိမ်ဖုန်းလေး ရှိတာတောင် အိမ်မကပ်ရလောက်အောင် အလုပ်များတာ .. ဟန်းဖုန်းသာ ဆိုရင် အိမ်သာထဲကတောင် အလုပ်လုပ်နေရမှာ တဲ့ ..
ကိုယ်လဲ အဲဒီအယူအဆကို ကြိုက်လို့ ဂျီ ပေါ်ခါစမှာတောင် မလျှောက်ဖြစ်ဘူး .. နောက်မှ အဖွဲ့လိုက် လျှောက်ကြရအောင် လို့ ဆော်သြောတဲ့ လူကြောင့် ၅၁ အရောက်မှာ ကိုင်ဖြစ်တယ် .. အဲဒီအချိန်က စလို့ ဘယ်သွားသွား ကိုယ့်ကို ခိုင်းမယ့်လူက မိအောင် ခေါ်နိုင်ကြတော့ .. သြော် သူငယ်ချင်း ပြောတာ အမှန်ပါလား .လို့ ခံစားမိတယ် ..
စီးပွားရေး လုပ်တဲ့လူတွေ အတွက်တော့ အိုးမကွာ အိမ်မကွာ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ အချက်အလက်တွေ သိရလို့ တန်တယ်လို့ သိပါတယ် .. သာမန် လက်လုပ်လက်စားတွေအတွက် မလိုဘူးလို့ (ထင်ပါတယ် လို့ပဲ ဆိုပါရစေ .. နို့မဟုတ်ရင် အထင်စမောလှချည်လားလို့ ရန်တွေ့တာ ခံရမှာစိုးတယ်)
၅၀၀၀ တန် ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ဆိုတာ တစ်နေရာမှာ ရေးခဲ့ဖူးပြီးပြီ .. အခြားနိုင်ငံတွေမှာ sim card ကို အလကား ရတာ .. အလကားနီးပါး ရတာ .. အခုက ၅ သိန်း ခေတ် ၁၀ သိန်း ခေတ် ၁၅ သိန်းခေတ် မှောင်ခိုဈေးမှာ သိန်း ၄၀ ခေတ် .. အခုနောက်ပိုင်း ၅ သိန်း ပြန်ဆင်း .. အခုနောက်ဆုံး မလျှော့သာ လျှော့သာ ၂ သိန်း တဲ့ (ရှယ်ယာရှင်တွေ အတော် မြတ်သွားကြမှာ)
အန်တီထွန်း က ၂၅၀၀၀၀ တန် WCDMA ၀ယ်ထားတာ လှိုင်သာယာ ဘက်ရောက်ရင် ခေါ်လို့မရတော့ဘူးတဲ့ ။
နင့်ကို ဖုန်းခေါ်၇င် စက်ပိတ်ထားတယ် ၊ ဧ၇ိယာပြင်ပရောက်နေတယ်လို့ပဲပြောနေတာတဲ့ ။
လိုင်းကတော့အပြည့်ပဲ ။ လှည်းတန်းလောက်ရောက်ရင်တော့ခေါ်လို့ရသွားတယ် ။
မေလေးအတွက် ကိုပေ အများကြီး ဝယ်ပေးဖို့ စိတ်ကူးရှိသကွဲ့ ။ ၅ထောင်တန် မြန်မြန်ပေါ်ပါစေဗျား ။
ဖုန်းဘေလ်တွေ ဈေးလျှော့ပေးပါ၊ မတ်စေ့ အလကားပို့ခွင့်ပြုပါ… 5000 နဲ့ သူ့အောက်ဖုန်းတွေ အမြန်ခွင့် ပြုပါတော့…. အင်တာနက်တွေ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ကော်နက်ရှင်ကောင်းကောင်း အမြန်ဆုံး သုံးနိုင်ပါစေ… ၀ှုးးးး မောလိုက်တာ :D
ငါးထောင်တန် တော့ မသိသေးဘူး .. ၆ လပိုင်းကျော်ရင် လက်ရှိ ၂ သိန်းတန် ဖုံးတွေ
၁ သိန်းနဲ့ရနိင်တော့မယ် ကြားမိပါတယ်.. ဆက်သွယ်ရေးဋ္ဌာန ထဲက ထွက်လာတဲ့
သတင်းလို့ တော့ပြောကြတာပါပဲ.. အတည်ပြုလို့တော့မရနိုင်သေးဘူးထင်ပါရဲ့…
အင်း… ၂ သိန်းနဲ့ ဝယ်ထားသူတွေ စိတ်ညစ်နေရပြီတဲ့…..။